Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/11 Aprily 2014 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/11 Aprily 2014
hitamaso (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Advox (nitranga in-1) : Fanampin'izany, ny hetsika dia hiompana amin'ny:
Fanaovana topimaso amin'ny asa ataonay ato anatin'ny Global Voices, isan'izany ny Rising Voices, ny Advox, ary ny Lingua. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
hiompana (nitranga in-1) : Fanampin'izany, ny hetsika dia hiompana amin'ny:
tatitry (nitranga in-1) : Hoy ny tatitry ny CMO. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mila (nitranga in-1) : org raha mila vaovao fanampiny. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
andro (nitranga in-1) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
Voatatitra fa nisy telo andro maro ny mpiasa safotra tany amin'ny orinasa mpanao lamba tao Kambodza tamin'ny herinandro voalohany tamin'ny volana avrily. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fisoratana (nitranga in-2) : Tsy maintsy misoratra anarana mialoha raha hanatrika izany (jereo eto ambany ny momba ny fisoratana anarana). (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
miala (nitranga in-1) : Ny toerana nitrangan'ny famoretana nisian'ny ra mandriaka dia miala metatra vitsivitsy monja amin'ireo orinasa ahitana fahatoranan'ny mpiasa maro tamin'io herinandro io. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
ataontsika (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
diezy (nitranga in-1) : Araho ny diezy #GVMeetup mikasika izany sy ireo fihaonana hafa manerantany. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
momba (nitranga in-3) : Tsy maintsy misoratra anarana mialoha raha hanatrika izany (jereo eto ambany ny momba ny fisoratana anarana). (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Nandritra (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
kolikoly (nitranga in-1) : Miantso ny governemanta izahay hamerina haingana ny fifampiresahana ary hampitsahatra ny kolikoly (tafapaka lalina) izay ahafantarana manokana an'i Kambodza eo amin'ny resaka fandraharahana amin'izao fotoana izao. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fandraharahana (nitranga in-1) : Miantso ny governemanta izahay hamerina haingana ny fifampiresahana ary hampitsahatra ny kolikoly (tafapaka lalina) izay ahafantarana manokana an'i Kambodza eo amin'ny resaka fandraharahana amin'izao fotoana izao. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
firenena (nitranga in-2) : Tao an-drenivohitry ny firenena Phnom Penh, mpiasa 337, vehivavy ny ankamaroany, no nalefa hokarakaraina tany amin'ny toera-pitsaboana efatra samihafa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fahamendrehana (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hevitra (nitranga in-4) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Haharay (nitranga in-1) : Haharay mailaka fanamafisana mikasika ny fandraisanao anjara ianao. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
mpiasa (nitranga in-8) : mpiasa naelfa tao amin'ny toera-pitsaboana rehefa torana tao amin'ny orinasa fanenoman-damba. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
facebook (nitranga in-3) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
sosialy (nitranga in-1) : Saripika avy amin'ny pejy facebook Ivontoeran'ny Fikambanana Mampiofana momba ny Lalàna sosialy
Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Jentilisa
indray (nitranga in-1) : miverina indray ny Fihaonan'ny Global Voices amin'ity taona 2014 ity. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Global (nitranga in-5) : miverina indray ny Fihaonan'ny Global Voices amin'ity taona 2014 ity. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
vaovao (nitranga in-3) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
standards (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Momba (nitranga in-1) : Nampifandraisin'ny Ivontoeran'ny Fikambanana Manofana Momba Ny Lalàna (Sosialy) ho mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny hakelin'ny karaman'ny mpiasan'ny fanaovana akanjo ireny fahatoranana ireny. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
businesses (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
We call on the government to return to wage negotiations immediately and end the endemic corruption that businesses now associate with Cambodia. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Saingy (nitranga in-1) : Saingy nanambara ny governemanta fa fisondrotana $15-$20 ihany no zakan'ny toekarena. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Oniversite (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
toerana (nitranga in-2) : Maimai-poana ny fanatrehana ny fihaonana, saingy voafetra kosa ny toerana. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mizara (nitranga in-1) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
nitaraina (nitranga in-1) : Efa an-taonany maro ny mpiasa no nitaraina amin'ny fahakelezan'ny karama. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Nwachukwu (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
fahatoranan' (nitranga in-1) : Ny toerana nitrangan'ny famoretana nisian'ny ra mandriaka dia miala metatra vitsivitsy monja amin'ireo orinasa ahitana fahatoranan'ny mpiasa maro tamin'io herinandro io. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
SREY (nitranga in-1) : com/S5RUQQDjwn
— Sopheak SREY (@sopheaksrey) April 3, 2014 Tamin'ny 3 avrily, mihoatra ny 200 ny mpiasan'ny fanaovana akanjo safotra tao Canadia Park, izay nahitana ilay fitokonana narahina ra mandriaka tamin'ny janoary 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mihoatra (nitranga in-2) : Manondrana vokatra any ivelany mitetina 5 miliara dolara ary mampiasa olona mihoatra ny 600. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
international (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hetsika (nitranga in-3) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
faobe (nitranga in-1) : Efa nisy nitatitra hatrany ny fahatoranana faobe sy ampangaina ho anisan'ny milaza ny maharatsy ny toetry ny asa ao anatin'ny orinasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fahatoranana (nitranga in-3) : Efa niahiahy tamin'ny voalohany ny vondrona sendikà fa “rano sy sakafo tsy ara-pahasalamana sy ny fofon'akora” no niteraka ny fahatoranana teo amin'ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
sisa (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
reported (nitranga in-1) : CMO reported. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
iray (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
nisian' (nitranga in-1) : Ny toerana nitrangan'ny famoretana nisian'ny ra mandriaka dia miala metatra vitsivitsy monja amin'ireo orinasa ahitana fahatoranan'ny mpiasa maro tamin'io herinandro io. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
address (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
monja (nitranga in-1) : Ny toerana nitrangan'ny famoretana nisian'ny ra mandriaka dia miala metatra vitsivitsy monja amin'ireo orinasa ahitana fahatoranan'ny mpiasa maro tamin'io herinandro io. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
anarana (nitranga in-3) : Tsy maintsy misoratra anarana mialoha raha hanatrika izany (jereo eto ambany ny momba ny fisoratana anarana). (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fanamafisana (nitranga in-1) : Haharay mailaka fanamafisana mikasika ny fandraisanao anjara ianao. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
hamoahana (nitranga in-1) : Adihevitra mikasika ny fomba hamoahana vaovao ao amin'ny fampitam-baovao an'olo-tsotra. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
employees (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Voatatitra (nitranga in-1) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
tahiry (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fahasaforan' (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
karaman' (nitranga in-2) : Nampifandraisin'ny Ivontoeran'ny Fikambanana Manofana Momba Ny Lalàna (Sosialy) ho mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny hakelin'ny karaman'ny mpiasan'ny fanaovana akanjo ireny fahatoranana ireny. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
metatra (nitranga in-1) : Ny toerana nitrangan'ny famoretana nisian'ny ra mandriaka dia miala metatra vitsivitsy monja amin'ireo orinasa ahitana fahatoranan'ny mpiasa maro tamin'io herinandro io. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
iraisampirenena (nitranga in-3) : Tsy fantatra anarana ivelan'i Kambodza ireo anarana ireo saingy mamokatra fitafiana ho an'ny marika iraisampirenena Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
bloody (nitranga in-1) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fepetra (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hamaha (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
saingy (nitranga in-3) : Maimai-poana ny fanatrehana ny fihaonana, saingy voafetra kosa ny toerana. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hanatrika (nitranga in-1) : Tsy maintsy misoratra anarana mialoha raha hanatrika izany (jereo eto ambany ny momba ny fisoratana anarana). (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
manaraka (nitranga in-1) : Faly izahay manambara ny fihaonana manaraka izay hotontosaina amin'ny Alakamisy 17 Avrily ao Lagos, Nizeria. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
ivelany (nitranga in-1) : Manondrana vokatra any ivelany mitetina 5 miliara dolara ary mampiasa olona mihoatra ny 600. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hampakarana (nitranga in-1) : Tamin'ny desambra lasa teo, efa nangataka tamin'ny governemanta ireo mpiasan'ny fanaovan-damba ireo hampakarana ny karama ambany indrindra $80 ho $160. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
call (nitranga in-2) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
strike (nitranga in-1) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
telo (nitranga in-2) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
more (nitranga in-1) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
nitrangan' (nitranga in-1) : Ny toerana nitrangan'ny famoretana nisian'ny ra mandriaka dia miala metatra vitsivitsy monja amin'ireo orinasa ahitana fahatoranan'ny mpiasa maro tamin'io herinandro io. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mivaingana (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
niahiahy (nitranga in-1) : Efa niahiahy tamin'ny voalohany ny vondrona sendikà fa “rano sy sakafo tsy ara-pahasalamana sy ny fofon'akora” no niteraka ny fahatoranana teo amin'ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
tsirairay (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Adidas (nitranga in-5) : Tsy fantatra anarana ivelan'i Kambodza ireo anarana ireo saingy mamokatra fitafiana ho an'ny marika iraisampirenena Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
this (nitranga in-1) : Manasa ireo marika manerantany ny vondrona hanatsara ny fampitaovana ireo mpiasany:
International brands such as Adidas, Puma and Nike are complicit in this. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hotontosaina (nitranga in-1) : Faly izahay manambara ny fihaonana manaraka izay hotontosaina amin'ny Alakamisy 17 Avrily ao Lagos, Nizeria. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
fitokonana (nitranga in-2) : Ho setrin'izany dia nanao fitokonana nanerana ny firenena ireo sendikan'ny fanaovan-damba saingy naparitaky ny polisy tamin-kerisetra tamin'ny Janoary. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
ivelan' (nitranga in-1) : Tsy fantatra anarana ivelan'i Kambodza ireo anarana ireo saingy mamokatra fitafiana ho an'ny marika iraisampirenena Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Manondrana (nitranga in-1) : Manondrana vokatra any ivelany mitetina 5 miliara dolara ary mampiasa olona mihoatra ny 600. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hamaliana (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Manasa (nitranga in-1) : Manasa ireo marika manerantany ny vondrona hanatsara ny fampitaovana ireo mpiasany:
Media (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
fanampiny (nitranga in-1) : org raha mila vaovao fanampiny. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Fihaonana (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
kosa (nitranga in-2) : Maimai-poana ny fanatrehana ny fihaonana, saingy voafetra kosa ny toerana. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
needs (nitranga in-2) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
provide (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Kambodza (nitranga in-4) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
volana (nitranga in-1) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
hampitsahatra (nitranga in-1) : Miantso ny governemanta izahay hamerina haingana ny fifampiresahana ary hampitsahatra ny kolikoly (tafapaka lalina) izay ahafantarana manokana an'i Kambodza eo amin'ny resaka fandraharahana amin'izao fotoana izao. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Fihaonan' (nitranga in-1) : miverina indray ny Fihaonan'ny Global Voices amin'ity taona 2014 ity. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
torana (nitranga in-2) : mpiasa naelfa tao amin'ny toera-pitsaboana rehefa torana tao amin'ny orinasa fanenoman-damba. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
nanerana (nitranga in-1) : Ho setrin'izany dia nanao fitokonana nanerana ny firenena ireo sendikan'ny fanaovan-damba saingy naparitaky ny polisy tamin-kerisetra tamin'ny Janoary. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
ireo (nitranga in-12) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
such (nitranga in-2) : Manasa ireo marika manerantany ny vondrona hanatsara ny fampitaovana ireo mpiasany:
fandaniana (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
vitsivitsy (nitranga in-1) : Ny toerana nitrangan'ny famoretana nisian'ny ra mandriaka dia miala metatra vitsivitsy monja amin'ireo orinasa ahitana fahatoranan'ny mpiasa maro tamin'io herinandro io. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
nalefa (nitranga in-1) : Tao an-drenivohitry ny firenena Phnom Penh, mpiasa 337, vehivavy ny ankamaroany, no nalefa hokarakaraina tany amin'ny toera-pitsaboana efatra samihafa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hamerina (nitranga in-1) : Miantso ny governemanta izahay hamerina haingana ny fifampiresahana ary hampitsahatra ny kolikoly (tafapaka lalina) izay ahafantarana manokana an'i Kambodza eo amin'ny resaka fandraharahana amin'izao fotoana izao. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
lafiny (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Phnom (nitranga in-1) : Tao an-drenivohitry ny firenena Phnom Penh, mpiasa 337, vehivavy ny ankamaroany, no nalefa hokarakaraina tany amin'ny toera-pitsaboana efatra samihafa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
ireny (nitranga in-2) : Nampifandraisin'ny Ivontoeran'ny Fikambanana Manofana Momba Ny Lalàna (Sosialy) ho mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny hakelin'ny karaman'ny mpiasan'ny fanaovana akanjo ireny fahatoranana ireny. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
maintsy (nitranga in-1) : Tsy maintsy misoratra anarana mialoha raha hanatrika izany (jereo eto ambany ny momba ny fisoratana anarana). (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Adihevitra (nitranga in-1) : Adihevitra mikasika ny fomba hamoahana vaovao ao amin'ny fampitam-baovao an'olo-tsotra. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
hizara (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Janoary (nitranga in-1) : Ho setrin'izany dia nanao fitokonana nanerana ny firenena ireo sendikan'ny fanaovan-damba saingy naparitaky ny polisy tamin-kerisetra tamin'ny Janoary. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hanatsara (nitranga in-1) : Manasa ireo marika manerantany ny vondrona hanatsara ny fampitaovana ireo mpiasany:
setry (nitranga in-1) : Ho setrin'izany dia nanao fitokonana nanerana ny firenena ireo sendikan'ny fanaovan-damba saingy naparitaky ny polisy tamin-kerisetra tamin'ny Janoary. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
haingana (nitranga in-1) : Miantso ny governemanta izahay hamerina haingana ny fifampiresahana ary hampitsahatra ny kolikoly (tafapaka lalina) izay ahafantarana manokana an'i Kambodza eo amin'ny resaka fandraharahana amin'izao fotoana izao. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
2014 (nitranga in-4) : miverina indray ny Fihaonan'ny Global Voices amin'ity taona 2014 ity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
2013 (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
return (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
nangataka (nitranga in-1) : Tamin'ny desambra lasa teo, efa nangataka tamin'ny governemanta ireo mpiasan'ny fanaovan-damba ireo hampakarana ny karama ambany indrindra $80 ho $160. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
naelfa (nitranga in-1) : mpiasa naelfa tao amin'ny toera-pitsaboana rehefa torana tao amin'ny orinasa fanenoman-damba. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hakely (nitranga in-1) : Nampifandraisin'ny Ivontoeran'ny Fikambanana Manofana Momba Ny Lalàna (Sosialy) ho mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny hakelin'ny karaman'ny mpiasan'ny fanaovana akanjo ireny fahatoranana ireny. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fototra (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Afaka (nitranga in-1) : Afaka mandefa mailaka ihany koa ianao any amin'ny: rising [at] globalvoicesonline. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Fifandraisana (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
reasonable (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
resaka (nitranga in-2) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Fizarana (nitranga in-1) : Fizarana fomba ahafahan'ny vondrom-piarahamonina lehibe hifandray amin'ny Global Voices. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
garment (nitranga in-1) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
marika (nitranga in-4) : Tsy fantatra anarana ivelan'i Kambodza ireo anarana ireo saingy mamokatra fitafiana ho an'ny marika iraisampirenena Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
nanambara (nitranga in-1) : Saingy nanambara ny governemanta fa fisondrotana $15-$20 ihany no zakan'ny toekarena. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
ihany (nitranga in-3) : Afaka mandefa mailaka ihany koa ianao any amin'ny: rising [at] globalvoicesonline. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Faly (nitranga in-1) : Faly izahay manambara ny fihaonana manaraka izay hotontosaina amin'ny Alakamisy 17 Avrily ao Lagos, Nizeria. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
dolara (nitranga in-1) : Manondrana vokatra any ivelany mitetina 5 miliara dolara ary mampiasa olona mihoatra ny 600. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hampiantranoy (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
sakafo (nitranga in-2) : Efa niahiahy tamin'ny voalohany ny vondrona sendikà fa “rano sy sakafo tsy ara-pahasalamana sy ny fofon'akora” no niteraka ny fahatoranana teo amin'ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
voalohany (nitranga in-2) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
olona (nitranga in-1) : Manondrana vokatra any ivelany mitetina 5 miliara dolara ary mampiasa olona mihoatra ny 600. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mpanao (nitranga in-1) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
ataonay (nitranga in-1) : Fanampin'izany, ny hetsika dia hiompana amin'ny:
fenoy (nitranga in-1) : Raha liana te-handray anjara ianao, fenoy ity takelaka fisoratana ity. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
associate (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
This (nitranga in-1) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
manerana (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
ankamaroany (nitranga in-1) : Tao an-drenivohitry ny firenena Phnom Penh, mpiasa 337, vehivavy ny ankamaroany, no nalefa hokarakaraina tany amin'ny toera-pitsaboana efatra samihafa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Jentilisa (nitranga in-1) : Saripika avy amin'ny pejy facebook Ivontoeran'ny Fikambanana Mampiofana momba ny Lalàna sosialy
StumbleUpon (nitranga in-2) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
benefits (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
antsoina (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
tanàna (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
mikasika (nitranga in-4) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
fitsipika (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
manaja (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hifandray (nitranga in-1) : Fizarana fomba ahafahan'ny vondrom-piarahamonina lehibe hifandray amin'ny Global Voices. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
miliara (nitranga in-1) : Manondrana vokatra any ivelany mitetina 5 miliara dolara ary mampiasa olona mihoatra ny 600. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
akanjo (nitranga in-2) : com/S5RUQQDjwn
tsikombakomba (nitranga in-1) : Miray tsikombakomba amin'ity sehatra ity ny marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fahampian' (nitranga in-1) : Nampifandraisin'ny Ivontoeran'ny Fikambanana Manofana Momba Ny Lalàna (Sosialy) ho mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny hakelin'ny karaman'ny mpiasan'ny fanaovana akanjo ireny fahatoranana ireny. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fantatra (nitranga in-1) : Tsy fantatra anarana ivelan'i Kambodza ireo anarana ireo saingy mamokatra fitafiana ho an'ny marika iraisampirenena Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
delicious (nitranga in-2) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
wages (nitranga in-2) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
endemic (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
Mamisoa (nitranga in-1) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
pejy (nitranga in-2) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
sehatry (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Eduardo (nitranga in-1) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
tranobe (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
their (nitranga in-2) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
sehatra (nitranga in-1) : Miray tsikombakomba amin'ity sehatra ity ny marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
orinasa (nitranga in-7) : mpiasa naelfa tao amin'ny toera-pitsaboana rehefa torana tao amin'ny orinasa fanenoman-damba. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
that (nitranga in-3) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fahakelezan' (nitranga in-1) : Efa an-taonany maro ny mpiasa no nitaraina amin'ny fahakelezan'ny karama. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
narahina (nitranga in-1) : com/S5RUQQDjwn
voafetra (nitranga in-1) : Maimai-poana ny fanatrehana ny fihaonana, saingy voafetra kosa ny toerana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
than (nitranga in-1) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Textile (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
zakan' (nitranga in-1) : Saingy nanambara ny governemanta fa fisondrotana $15-$20 ihany no zakan'ny toekarena. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Tamy (nitranga in-2) : Tamin'ny desambra lasa teo, efa nangataka tamin'ny governemanta ireo mpiasan'ny fanaovan-damba ireo hampakarana ny karama ambany indrindra $80 ho $160. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mpianatra (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Penh (nitranga in-1) : Tao an-drenivohitry ny firenena Phnom Penh, mpiasa 337, vehivavy ny ankamaroany, no nalefa hokarakaraina tany amin'ny toera-pitsaboana efatra samihafa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mandray (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
desambra (nitranga in-1) : Tamin'ny desambra lasa teo, efa nangataka tamin'ny governemanta ireo mpiasan'ny fanaovan-damba ireo hampakarana ny karama ambany indrindra $80 ho $160. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
take (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mpamaky (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
ampangaina (nitranga in-1) : Efa nisy nitatitra hatrany ny fahatoranana faobe sy ampangaina ho anisan'ny milaza ny maharatsy ny toetry ny asa ao anatin'ny orinasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
measures (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
satisfy (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
topimaso (nitranga in-1) : Fanampin'izany, ny hetsika dia hiompana amin'ny:
janoary (nitranga in-1) : com/S5RUQQDjwn
filana (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
manambara (nitranga in-1) : Faly izahay manambara ny fihaonana manaraka izay hotontosaina amin'ny Alakamisy 17 Avrily ao Lagos, Nizeria. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
safotra (nitranga in-2) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
miasa (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
mifandraika (nitranga in-1) : Nampifandraisin'ny Ivontoeran'ny Fikambanana Manofana Momba Ny Lalàna (Sosialy) ho mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny hakelin'ny karaman'ny mpiasan'ny fanaovana akanjo ireny fahatoranana ireny. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mahasahana (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
izao (nitranga in-4) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
efatra (nitranga in-1) : Tao an-drenivohitry ny firenena Phnom Penh, mpiasa 337, vehivavy ny ankamaroany, no nalefa hokarakaraina tany amin'ny toera-pitsaboana efatra samihafa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
takelaka (nitranga in-1) : Raha liana te-handray anjara ianao, fenoy ity takelaka fisoratana ity. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
izay (nitranga in-6) : Faly izahay manambara ny fihaonana manaraka izay hotontosaina amin'ny Alakamisy 17 Avrily ao Lagos, Nizeria. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fofon' (nitranga in-1) : Efa niahiahy tamin'ny voalohany ny vondrona sendikà fa “rano sy sakafo tsy ara-pahasalamana sy ny fofon'akora” no niteraka ny fahatoranana teo amin'ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
ahafahany (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
traikefa (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
fanaovana (nitranga in-2) : com/S5RUQQDjwn
Miray (nitranga in-1) : Miray tsikombakomba amin'ity sehatra ity ny marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
izahay (nitranga in-3) : Faly izahay manambara ny fihaonana manaraka izay hotontosaina amin'ny Alakamisy 17 Avrily ao Lagos, Nizeria. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
sendikan' (nitranga in-1) : Ho setrin'izany dia nanao fitokonana nanerana ny firenena ireo sendikan'ny fanaovan-damba saingy naparitaky ny polisy tamin-kerisetra tamin'ny Janoary. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
ahafahan' (nitranga in-2) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
fainted (nitranga in-1) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
vokatra (nitranga in-1) : Manondrana vokatra any ivelany mitetina 5 miliara dolara ary mampiasa olona mihoatra ny 600. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
nisy (nitranga in-2) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
Shenzhou (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
vehivavy (nitranga in-1) : Tao an-drenivohitry ny firenena Phnom Penh, mpiasa 337, vehivavy ny ankamaroany, no nalefa hokarakaraina tany amin'ny toera-pitsaboana efatra samihafa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
where (nitranga in-1) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
tontolo (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
nadika (nitranga in-2) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
Ivotoeran' (nitranga in-1) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
currently (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Park (nitranga in-3) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
state (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Mpiasa (nitranga in-1) : Mpiasa 300 mahery no torana ao amin'ny orinasa fanaovan-damba. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
various (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
corruption (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
wage (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
reddit (nitranga in-2) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
maraina (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
vondrona (nitranga in-3) : Efa niahiahy tamin'ny voalohany ny vondrona sendikà fa “rano sy sakafo tsy ara-pahasalamana sy ny fofon'akora” no niteraka ny fahatoranana teo amin'ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mailaka (nitranga in-2) : Haharay mailaka fanamafisana mikasika ny fandraisanao anjara ianao. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Raha (nitranga in-2) : Raha liana te-handray anjara ianao, fenoy ity takelaka fisoratana ity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
tangible (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
lasa (nitranga in-1) : Tamin'ny desambra lasa teo, efa nangataka tamin'ny governemanta ireo mpiasan'ny fanaovan-damba ireo hampakarana ny karama ambany indrindra $80 ho $160. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Fampifandraisana (nitranga in-1) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Lalàna (nitranga in-3) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
tahaka (nitranga in-2) : Miray tsikombakomba amin'ity sehatra ity ny marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Alakamisy (nitranga in-1) : Faly izahay manambara ny fihaonana manaraka izay hotontosaina amin'ny Alakamisy 17 Avrily ao Lagos, Nizeria. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Miantso (nitranga in-1) : Miantso ny governemanta izahay hamerina haingana ny fifampiresahana ary hampitsahatra ny kolikoly (tafapaka lalina) izay ahafantarana manokana an'i Kambodza eo amin'ny resaka fandraharahana amin'izao fotoana izao. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
toekarena (nitranga in-1) : Saingy nanambara ny governemanta fa fisondrotana $15-$20 ihany no zakan'ny toekarena. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
globalvoicesonline (nitranga in-1) : Afaka mandefa mailaka ihany koa ianao any amin'ny: rising [at] globalvoicesonline. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
niteraka (nitranga in-1) : Efa niahiahy tamin'ny voalohany ny vondrona sendikà fa “rano sy sakafo tsy ara-pahasalamana sy ny fofon'akora” no niteraka ny fahatoranana teo amin'ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
taona (nitranga in-2) : miverina indray ny Fihaonan'ny Global Voices amin'ity taona 2014 ity. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
andraikitra (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
miverina (nitranga in-1) : miverina indray ny Fihaonan'ny Global Voices amin'ity taona 2014 ity. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
filàn' (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hoan' (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
ianao (nitranga in-3) : Raha liana te-handray anjara ianao, fenoy ity takelaka fisoratana ity. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
maro (nitranga in-3) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
ambany (nitranga in-2) : Tsy maintsy misoratra anarana mialoha raha hanatrika izany (jereo eto ambany ny momba ny fisoratana anarana). (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
basic (nitranga in-2) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
meeting (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
life (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mandriaka (nitranga in-2) : Ny toerana nitrangan'ny famoretana nisian'ny ra mandriaka dia miala metatra vitsivitsy monja amin'ireo orinasa ahitana fahatoranan'ny mpiasa maro tamin'io herinandro io. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
anjara (nitranga in-4) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Egbunike (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
enina (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Sopheak (nitranga in-1) : com/S5RUQQDjwn
fitafiana (nitranga in-1) : Tsy fantatra anarana ivelan'i Kambodza ireo anarana ireo saingy mamokatra fitafiana ho an'ny marika iraisampirenena Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
googleplus (nitranga in-2) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
mikarakara (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
nanao (nitranga in-1) : Ho setrin'izany dia nanao fitokonana nanerana ny firenena ireo sendikan'ny fanaovan-damba saingy naparitaky ny polisy tamin-kerisetra tamin'ny Janoary. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
tany (nitranga in-2) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
nahitana (nitranga in-2) : com/S5RUQQDjwn
mpikambana (nitranga in-2) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
ahafantarana (nitranga in-1) : Miantso ny governemanta izahay hamerina haingana ny fifampiresahana ary hampitsahatra ny kolikoly (tafapaka lalina) izay ahafantarana manokana an'i Kambodza eo amin'ny resaka fandraharahana amin'izao fotoana izao. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
indrindra (nitranga in-1) : Tamin'ny desambra lasa teo, efa nangataka tamin'ny governemanta ireo mpiasan'ny fanaovan-damba ireo hampakarana ny karama ambany indrindra $80 ho $160. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
tambajotra (nitranga in-1) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
April (nitranga in-2) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
lamba (nitranga in-1) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
mandefa (nitranga in-1) : Afaka mandefa mailaka ihany koa ianao any amin'ny: rising [at] globalvoicesonline. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
aminà (nitranga in-1) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Taorian' (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
hatrany (nitranga in-1) : Efa nisy nitatitra hatrany ny fahatoranana faobe sy ampangaina ho anisan'ny milaza ny maharatsy ny toetry ny asa ao anatin'ny orinasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
rehefa (nitranga in-1) : mpiasa naelfa tao amin'ny toera-pitsaboana rehefa torana tao amin'ny orinasa fanenoman-damba. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fampitaovana (nitranga in-2) : Manasa ireo marika manerantany ny vondrona hanatsara ny fampitaovana ireo mpiasany:
Sekoly (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
hianatra (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Nanoro (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
mahaolona (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
zavatra (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
lehibe (nitranga in-1) : Fizarana fomba ahafahan'ny vondrom-piarahamonina lehibe hifandray amin'ny Global Voices. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
iantsorohanay (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
concrete (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
savings (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Lagos (nitranga in-2) : Faly izahay manambara ny fihaonana manaraka izay hotontosaina amin'ny Alakamisy 17 Avrily ao Lagos, Nizeria. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
antso (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
asan' (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Saripika (nitranga in-2) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
Puma (nitranga in-5) : Tsy fantatra anarana ivelan'i Kambodza ireo anarana ireo saingy mamokatra fitafiana ho an'ny marika iraisampirenena Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mialoha (nitranga in-1) : Tsy maintsy misoratra anarana mialoha raha hanatrika izany (jereo eto ambany ny momba ny fisoratana anarana). (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
vakio (nitranga in-2) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
polisy (nitranga in-1) : Ho setrin'izany dia nanao fitokonana nanerana ny firenena ireo sendikan'ny fanaovan-damba saingy naparitaky ny polisy tamin-kerisetra tamin'ny Janoary. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Cambodia (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
human (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
immediately (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
Sehatra (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
andianà (nitranga in-1) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Fanaovana (nitranga in-1) : Fanampin'izany, ny hetsika dia hiompana amin'ny:
workers (nitranga in-2) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
avrily (nitranga in-2) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
milaza (nitranga in-2) : Efa nisy nitatitra hatrany ny fahatoranana faobe sy ampangaina ho anisan'ny milaza ny maharatsy ny toetry ny asa ao anatin'ny orinasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Victoria (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Mong (nitranga in-1) : Saripika avy amin'ny pejy facebook Ivontoeran'ny Fikambanana Mampiofana momba ny Lalàna sosialy
government (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
Avila (nitranga in-1) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
izany (nitranga in-4) : Tsy maintsy misoratra anarana mialoha raha hanatrika izany (jereo eto ambany ny momba ny fisoratana anarana). (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
dignity (nitranga in-1) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Lingua (nitranga in-1) : Fanampin'izany, ny hetsika dia hiompana amin'ny:
mahery (nitranga in-1) : Mpiasa 300 mahery no torana ao amin'ny orinasa fanaovan-damba. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
nitranga (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fahafahampo (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Rising (nitranga in-1) : Fanampin'izany, ny hetsika dia hiompana amin'ny:
manao (nitranga in-2) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
antonony (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hahafahan' (nitranga in-2) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
misoratra (nitranga in-1) : Tsy maintsy misoratra anarana mialoha raha hanatrika izany (jereo eto ambany ny momba ny fisoratana anarana). (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
manokana (nitranga in-2) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fotoana (nitranga in-2) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Fanampy (nitranga in-1) : Fanampin'izany, ny hetsika dia hiompana amin'ny:
twitter (nitranga in-3) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
Avrily (nitranga in-1) : Faly izahay manambara ny fihaonana manaraka izay hotontosaina amin'ny Alakamisy 17 Avrily ao Lagos, Nizeria. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
anisan' (nitranga in-1) : Efa nisy nitatitra hatrany ny fahatoranana faobe sy ampangaina ho anisan'ny milaza ny maharatsy ny toetry ny asa ao anatin'ny orinasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
lalàna (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
International (nitranga in-1) : Manasa ireo marika manerantany ny vondrona hanatsara ny fampitaovana ireo mpiasany:
fihaonana (nitranga in-5) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Facebook (nitranga in-1) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
fisondrotana (nitranga in-1) : Saingy nanambara ny governemanta fa fisondrotana $15-$20 ihany no zakan'ny toekarena. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
maharatsy (nitranga in-1) : Efa nisy nitatitra hatrany ny fahatoranana faobe sy ampangaina ho anisan'ny milaza ny maharatsy ny toetry ny asa ao anatin'ny orinasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fifampiresahana (nitranga in-1) : Miantso ny governemanta izahay hamerina haingana ny fifampiresahana ary hampitsahatra ny kolikoly (tafapaka lalina) izay ahafantarana manokana an'i Kambodza eo amin'ny resaka fandraharahana amin'izao fotoana izao. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
anaty (nitranga in-4) : Fanampin'izany, ny hetsika dia hiompana amin'ny:
Fanaovana topimaso amin'ny asa ataonay ato anatin'ny Global Voices, isan'izany ny Rising Voices, ny Advox, ary ny Lingua. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
manandanja (nitranga in-1) : Raha milaza ny fitsipika sy ny lalàna samihafa fa manandanja ny karama mba hamaliana ny filàn'ny mpiasa sy ahafahany manao tahiry sy fandaniana antonony, dia tsy nahitana fahafahampo hitamaso kosa ny lafiny fampitaovana ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Araho (nitranga in-1) : Araho ny diezy #GVMeetup mikasika izany sy ireo fihaonana hafa manerantany. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
manerantany (nitranga in-2) : Araho ny diezy #GVMeetup mikasika izany sy ireo fihaonana hafa manerantany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
karama (nitranga in-4) : Efa an-taonany maro ny mpiasa no nitaraina amin'ny fahakelezan'ny karama. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
naparitaky (nitranga in-1) : Ho setrin'izany dia nanao fitokonana nanerana ny firenena ireo sendikan'ny fanaovan-damba saingy naparitaky ny polisy tamin-kerisetra tamin'ny Janoary. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
ahitana (nitranga in-1) : Ny toerana nitrangan'ny famoretana nisian'ny ra mandriaka dia miala metatra vitsivitsy monja amin'ireo orinasa ahitana fahatoranan'ny mpiasa maro tamin'io herinandro io. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Nandika (nitranga in-2) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
Vantanak (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
essential (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
lahatsoratra (nitranga in-2) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
governemanta (nitranga in-4) : Tamin'ny desambra lasa teo, efa nangataka tamin'ny governemanta ireo mpiasan'ny fanaovan-damba ireo hampakarana ny karama ambany indrindra $80 ho $160. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fanorenana (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fomba (nitranga in-2) : Fizarana fomba ahafahan'ny vondrom-piarahamonina lehibe hifandray amin'ny Global Voices. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
seeing (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mpandray (nitranga in-1) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Nike (nitranga in-5) : Tsy fantatra anarana ivelan'i Kambodza ireo anarana ireo saingy mamokatra fitafiana ho an'ny marika iraisampirenena Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mamokatra (nitranga in-1) : Tsy fantatra anarana ivelan'i Kambodza ireo anarana ireo saingy mamokatra fitafiana ho an'ny marika iraisampirenena Adidas, Puma ary Nike. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
rising (nitranga in-1) : Afaka mandefa mailaka ihany koa ianao any amin'ny: rising [at] globalvoicesonline. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Nizeria (nitranga in-1) : Faly izahay manambara ny fihaonana manaraka izay hotontosaina amin'ny Alakamisy 17 Avrily ao Lagos, Nizeria. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
mpiasan' (nitranga in-3) : Tamin'ny desambra lasa teo, efa nangataka tamin'ny governemanta ireo mpiasan'ny fanaovan-damba ireo hampakarana ny karama ambany indrindra $80 ho $160. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
tetikasany (nitranga in-1) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Mpanoratra (nitranga in-2) : Mpanoratra Eduardo Avila · Nandika Mamisoa
Daqian (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
isan' (nitranga in-1) : Fanampin'izany, ny hetsika dia hiompana amin'ny:
liana (nitranga in-2) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
tamy (nitranga in-9) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
famoretana (nitranga in-1) : Ny toerana nitrangan'ny famoretana nisian'ny ra mandriaka dia miala metatra vitsivitsy monja amin'ireo orinasa ahitana fahatoranan'ny mpiasa maro tamin'io herinandro io. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
mampiasa (nitranga in-1) : Manondrana vokatra any ivelany mitetina 5 miliara dolara ary mampiasa olona mihoatra ny 600. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Manofana (nitranga in-2) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
with (nitranga in-2) : And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
toetry (nitranga in-1) : Efa nisy nitatitra hatrany ny fahatoranana faobe sy ampangaina ho anisan'ny milaza ny maharatsy ny toetry ny asa ao anatin'ny orinasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
nitatitra (nitranga in-1) : Efa nisy nitatitra hatrany ny fahatoranana faobe sy ampangaina ho anisan'ny milaza ny maharatsy ny toetry ny asa ao anatin'ny orinasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Whilst (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Nampifandraisy (nitranga in-1) : Nampifandraisin'ny Ivontoeran'ny Fikambanana Manofana Momba Ny Lalàna (Sosialy) ho mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny hakelin'ny karaman'ny mpiasan'ny fanaovana akanjo ireny fahatoranana ireny. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
raha (nitranga in-2) : Tsy maintsy misoratra anarana mialoha raha hanatrika izany (jereo eto ambany ny momba ny fisoratana anarana). (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Mampiofana (nitranga in-1) : Saripika avy amin'ny pejy facebook Ivontoeran'ny Fikambanana Mampiofana momba ny Lalàna sosialy
Palatino (nitranga in-1) : Saripika avy amin'ny pejy facebook Ivontoeran'ny Fikambanana Mampiofana momba ny Lalàna sosialy
Voices (nitranga in-6) : miverina indray ny Fihaonan'ny Global Voices amin'ity taona 2014 ity. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
hampakatra (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
negotiations (nitranga in-1) : Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa:
mitetina (nitranga in-1) : Manondrana vokatra any ivelany mitetina 5 miliara dolara ary mampiasa olona mihoatra ny 600. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hafa (nitranga in-3) : Taorian'ireo andianà fihaonana nahitam-pahombiazana tao amin'ireo tanàna enina manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2013, mikarakara hetsika hoan'ireo mpamaky sy ny hafa liana amin'ny zavatra ataontsika ireo mpikambana ato amin'ny Global Voices mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny andraikitra iantsorohanay. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
codes (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Ivontoeran' (nitranga in-2) : Nampifandraisin'ny Ivontoeran'ny Fikambanana Manofana Momba Ny Lalàna (Sosialy) ho mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny hakelin'ny karaman'ny mpiasan'ny fanaovana akanjo ireny fahatoranana ireny. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
samihafa (nitranga in-2) : Tao an-drenivohitry ny firenena Phnom Penh, mpiasa 337, vehivavy ny ankamaroany, no nalefa hokarakaraina tany amin'ny toera-pitsaboana efatra samihafa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
hanomboka (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
bilaogera (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafahan'ireo mpianatra, bilaogera, sy ny sisa hafa miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizara traikefa sy hianatra momba ny asan'ny tsirairay avy ny Fihaonana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
sendikà (nitranga in-1) : Efa niahiahy tamin'ny voalohany ny vondrona sendikà fa “rano sy sakafo tsy ara-pahasalamana sy ny fofon'akora” no niteraka ny fahatoranana teo amin'ny mpiasa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
complicit (nitranga in-1) : Manasa ireo marika manerantany ny vondrona hanatsara ny fampitaovana ireo mpiasany:
Wide (nitranga in-1) : Nandritra ny herinandro, nitranga tamin'ny tranobe fanorenana 11 tao amin'ny orinasa telo ao anatin'ny Vantanak Park antsoina hoe Shenzhou, Daqian Textile ary New Wide izany fahasaforan'olona izany. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
handray (nitranga in-1) : Ka manao antso ho an'ireo marika iraisampirenena tahaka ny Adidas, Puma ary Nike izahay handray fepetra mivaingana mba hamaha ny resaka karama izay tsy mahasahana na filana fototra amin'izao fotoana izao ary tsy manaja ny fahamendrehana mahaolona. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Nosy (nitranga in-1) : Ny fihaonana dia hampiantranoin'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) izay miara-miasa amin'ny Sekolin'ny Media sy ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Pan-Atlantika ao amin'ny Nosy Victoria, ao Lagos, izay hanomboka amin'ny 9 ora maraina. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
Canadia (nitranga in-2) : This April 3, more than 200 garment workers fainted in Canadia Park, where bloody strike in Jan 2014. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
Fikambanana (nitranga in-2) : Nampifandraisin'ny Ivontoeran'ny Fikambanana Manofana Momba Ny Lalàna (Sosialy) ho mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny hakelin'ny karaman'ny mpiasan'ny fanaovana akanjo ireny fahatoranana ireny. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
ilay (nitranga in-1) : com/S5RUQQDjwn
tetikasa (nitranga in-1) : Fampifandraisana ireo hetsika ho anaty tambajotra mba hahafahan'ireo mpandray anjara mizara vaovao mikasika ireo tetikasany manokana ara-nomerika na hevitra ho aminà tetikasa. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
brands (nitranga in-2) : Manasa ireo marika manerantany ny vondrona hanatsara ny fampitaovana ireo mpiasany:
hokarakaraina (nitranga in-1) : Tao an-drenivohitry ny firenena Phnom Penh, mpiasa 337, vehivavy ny ankamaroany, no nalefa hokarakaraina tany amin'ny toera-pitsaboana efatra samihafa. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
fandraisanao (nitranga in-1) : Haharay mailaka fanamafisana mikasika ny fandraisanao anjara ianao. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
fanatrehana (nitranga in-1) : Maimai-poana ny fanatrehana ny fihaonana, saingy voafetra kosa ny toerana. (Fihaonan'ny Global Voices Ao Lagos, Nizeria)
fikambanana (nitranga in-1) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
expenditure (nitranga in-1) : Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits. (Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin'ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin'ny Herinandro)
herinandro (nitranga in-3) : Saripika avy ao amin'ny pejy Facebook Ivotoeran'ny fikambanana Manofana ny Lalàna (Sosialy)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/11_Aprily_2014&oldid=14077541"
Voaova farany tamin'ny 11 Aprily 2014 amin'ny 21:04 ity pejy ity.